Endai Kunotsvaga Tsvaga
Indaneti TV Home Nhau
Learning English Ndebele Zimbabwe VOA Shona TV
Zviri Kutarisirwa Kuuya 20:00 - 21:00
Dzimwe Terevhizheni Chirongwa
Matongerwo eNyika Calendar
Ndira 18, 2017
VaMaddock Chivasa veNCA Vorohwa kuBikita Vachitsvaga Rutsigiro
Vari kumiririra bato reNational Constitutional Assembly musarudzo yekuBikita West, VaMaddock Chivasa, nemumwe wavari kushanda navo kana kuti election agent, VaThomas Mudzamiri, vakarohwa zvakaipisisa neChipiri manheru munzvimbo iyi.
Chizvarwa cheZimbabwe, VaChinhema, Vokurudzira Vari Kunze Kunovhota
VaChinhema vanoti vakaenda kuMaputo vachinotsvaka mafuro manyoro, uye ndemumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mamiriyoni mana zviri kunze kwenyika nezvikonzero zvakasiyanasiyana.
Zanu PF Yobvuma Kuti Inoshandisa Chikafu neMbeu Ichikwezva Mavhoti
Vakasukuwere vati chikafu nembeu zvakabetsera bato ravo kuti rikwezve vatsigiri vanosvika zviuru gumi nezviviri uye vanovimba kuti Zanu PF yatotora nzvimbo ye Bikita West muparamende.
Pastor Mugadza Vopomerwa Mhosva Itsva
Mufundisi wesvondo yeRemnant Church, VaPatrick Mugadza, avo vanoti vakaudzwa naMwari kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachafa gore rino, vamiswa pamberi pedare nhasi vave kupomerwa imwe mhosva itsva.
VeZanu-PF neMDC-T Votaura nezveKudyidzana naVaTrump
Bato reZanu PF rinoti richaramba richikumbira hurumende itsva yeAmerica kuti ibvise zvirango zvakatemerwa hurumende yaVaRobert Mugabe.
Ndira 17, 2017
VaTsvangirai Vopinda Muvanhu Vachinzwa Zvavanofunga Pamusoro peMubatanidzwa Musarudzo
Asi Amai Virginia Nhepure vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti vatungamiriri vatange vaenda kuvanhu kunovabvunza zvavanoda kuti zviitwe vasati vatora matanho ane chekuita neramangwana ravo.
VaKasukuwere Voshanyira Mbare Zvichitevera Mafashamu eMvura
VaKasukuwere vati vanhu vakapa vanhu mvumo yekuvaka pese pese ndivo vanofanira kuripa vanhu vane dzimba dzakaparadzwa nemafashamu sezvo dzimba dzange dzakavakirwa pasingabvumidzwe.
Washington Yogadzirira Kugadzwa kwaVaTrump neChishanu
Kwasara mazuva maviri kuti mutungamiri mutsva we America, VaDonald Trump, vagadzwe muguta reWashington DC.
Vana Chiremba Vanoshandira Hurumende Vonyunyuta neMashandiro Avo
Mutungamiri wesangano iri, Doctor Edgar Munatsi, vanoti vakanyorera hurumende gwaro renyunyuto neChishanu chapfuura vachiipra nezvematambudziko akatarisana navanachiremba.
Kuipa kweMigwagwa Kwokanganisa Hupfumi muZimbabwe
Kunyangwe hazvo vanhu vakawanda munyika vari kufara kuti mvura gore rino yaturuka uye vachadza matura, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvivakwa zvenyika zvakaita semigwagwa iyo yazara makomba.
VaMzembi Vokwikwidza Zvakasimba neGurukota rekuSeychelles paChigaro cheUNWTO
Vaimbova gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika yeSeychelles, VaAlain St. Ange, vanonzi vave kupinda mudariro vachikwikwidzana negurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika, VaWalter Mzembi, pachigaro chekuva munyori mukuru musangano reUnited Nations World Tourism Organization kana kuti UNTWO.
MDC-T Yokurudzirwa Kubatsira Vari Kunze kweNyika Kunonyoresa Kuvhota